युगसम्बाद साप्ताहिक - स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान
Friday, 01.24.2020, 03:02am (GMT+5.5) Home Contact
स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान
हरेक व्यक्तिको सफलताको कारण उसको मेहेनत, इमान र नैतिकता नै हो । नैतिक रुपमा बलियो मान्छे कुनै पनि संकटको सामना गर्न गराउँदैन । मेहेनती मान्छे जस्तोसुकै संकटमा हरेस खाँदैन अनि इमान भएको मान्छेको शिर कहिल्यै झुक्दैन । यी तीन पक्ष व्यक्तिको सफलता, लोकप्रियता र सम्मानको आधार हो । यो शाश्वत सत्यको पालना गर्नेहरुको आज खडेरी परेको छ । यस्तो इमान र नैतिकताको खडेरीले नेपाल जस्ता थुप्रै मुलुकको राजनीतिमा परेको छ र यही खडेरीले हामी दग्ध छौं ।
कुनै पनि नीतिलाई सही मार्गमा डो¥याउने प्रमुख नीतिका वाहक वा चालकहरुले नैतिकता र इमान देखाउन सकेनन् भने त्यो देशको अवस्था कस्तो हुन्छ हामीले भोगिरहेका छौं । आज नेपालमा सबथोक भएर विकास नहुनुको पहिलो कारण यही हो । यहाँको स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गर्नुको साटो इमान र नैतिकहिनताको प्रयोग बढ्न थाल्यो । सबै नीतिहरु संचालन गर्ने राजनीतिमा इमान र नैतिकताको खडेरीको परिणाम समाज हरक्षण पतनको दिशातिर उन्मुख छ । मर्यादा के हो, माया केहो, सहानुभूति के हो, सम्वेदना के हो । अनि मानव हुनुको अर्थ के हो भन्ने नै बिर्सेर व्यक्ति चाहे राजनीतिक तहको जिम्मेवारी लिएका हुन वा बेकामे सबैमा एकलकाँटे स्वभाव विकसित भैरहेको छ ।
‘बसुधैंव कुटुम्बकम’को सूत्र भट्याउँदै विश्व बन्धुत्वको नारा घन्काउने पीता पुर्खाका अवधारणाहरु आज धुमिल भएको छ । त्यसैले व्यक्ति जति सम्पन्न भए पनि उ सुखी र खुसी छैन । रुपियाँ पैसा अनि जवाहरातको भण्डार थुपारे पनि उसले आन्ततः शान्ति पाउन सकेको छैन । धनको पछि जति नै कुदे पनि मृत्युको बेला उसलाई चाहिने एकथोपा पानी मात्रै हो । तर, मानिस त्यो कल्पना गर्नै चाहँदैन । अहिले संसार नै यस्तै व्यक्तिवादी चिन्तनको शिकार भएको छ । जताततै ‘म’ नै म को हालिमुहाली छ । ‘हामी’ भन्ने शब्दको अर्थ नै बेकार बनेको छ । यो सब इमान र नैतिकता स्खलित हुँदाको परिणाम हो ।
राजनीतिमा नैतिकताको उच्च मूल्य हुन्छ । नैतिक रुपमा दागलाग्ने सानो कुराले नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन्छ । तर नेपालमा राजनीतिमा नैतिकता प्रवेश नै गर्न पाएको छैन । आवेशमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने कथन समेत यहाँ लागू हुन सकेको छैन । नेताको सनकका भरमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको सौदावाजी हुन्छ । एकजनालाई खुसी पार्न मुलुक नै बन्धकमा राख्ने प्रपञ्च रचिन्छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावले यही कुरा चरितार्थ गरेको छ । जे कारण देखाएर उहाँमाथि महाभियोग लगाइयो त्यो आधार पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल काममा जान निर्देशन दियो । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव तत्काललाई कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएपछि यसका पक्षधरहरुको नैतिकताको लेखाजोखा सुरु भएको छ । अब सरकारको भविष्य के ? शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक उचाई कहाँ पुग्यो भन्ने लेखाजोखाकाबीच सरकार अझै स्वतन्त्र न्यायालयमाथि खनिन छोडेको छैन । सरकारले गरेको हरेक निर्णयलाई न्यायालयले सदर गर्नुपर्ने हो भने यो व्यवस्थालाई के भन्ने ? कसरी गणतन्त्र–लोकतन्त्र भन्ने ? खै लोकतन्त्र–गणतन्त्रका पक्षधरहरुको नैतिकता ?
एउटा कुरा पक्का छ– यदि कोही व्यक्ति इमान्दार र नैतिकवान छैन भने ऊ जीवनमा सफल हुनै सक्दैन । इमान र नैतिकता गुमाएर केही समय सफल भएको जस्तो देखिएला, तर त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । खासमा इमान र नैतिकताले नै व्यक्तिको वास्तविक चरित्र प्रदर्शन गर्दछ । अर्को सत्य के हो भने इमान र नैतिकवान व्यक्तिलाई सफलताको स्वाद चाख्न केही समय भने लाग्छ र जव ऊ सफल हुन्छ तव कहिल्यै पछिफर्कनु पर्दैन । त्यो सफलता दीर्घकालीन हुन्छ र उसले आफूसंगै आफ्ना पिता, पुर्खाको प्रतिष्ठा बढाउँछ भने भविष्यका सन्ततिका लागि एउटा सच्चा मार्गनिर्देश गर्दछ ।
आज यही मार्गदर्शनको अभाव छ । राजनीति–समाजनीतिमा इमान र नैतिकताको ठूलो खडेरी छ । राजनीतिक ओहदामा बसेकाहरुले प्रदर्शन गर्ने उच्च नैतिकता र उच्च इमानदारीता नै मुलुकका अरु क्षेत्रका लागि सही मार्ग हो । तर नेतृत्वमै यी दुई कुराको अभाव भएपछि बाँकी के रह्यो र ?
आज नैतिक स्खलनको पराकाष्टा छ । आफू सडकमा चिल्लो गाडीमा हुँइकिएर आमाबुबालाई वृद्धाश्रममा मिल्काउनेहरुको इमान र नैतिकताको लेखाजोखा कसरी गर्ने ? एउटा नैतिक र समाजिक शिक्षा दिने ‘डोको’ शीर्षकको कथा हामी सबैले मनन् गर्नु आवश्यक छ । कथा यस्तो छ– एउटा छोराले वृद्धावस्थामाा पुगेका आफ्ना बाबुलाई राति पहिरोमा लगेर मिल्काउन भन्दै डोका किनेर ल्याउँछ । उसको छोराले त्यो डोको किन भनेर प्रश्न गर्दा ‘हजुरबुबालाई मिल्काउन’ भन्ने जवाफ दिन्छ । त्यसपछि छोराले भन्छ– ‘हजुरबुबालाई फाले पनि डोका चाहि ल्याउनु है ।’ बाबुले सोध्छ– ‘किन’ ? छोराले जवाफ दिन्छ– ‘भोलिपर्सी तपाईं बुढो भएपछि पनि यही डोकोमा राखेर मिल्काउनुपर्छ !’ छोराको उत्तरले बाबु लत्र्याकलुत्रुक हुन्छ, अनि आफ्नो बाबुको राम्रो स्याहार–सुसार गर्न थाल्छ ।
अहिले त्यस्तै नातिको खाँचो छ देशमा । हरेक घरका युवाहरुले अब आफ्ना बाबुआमालाई सोध्नुपर्छ, आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति नैतिकता र इमानका साथ कमाएको हो कि बेइमानी गरेर ? समाजमा फोस्रो प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने नाममा बेइमानी गरेर विलाशी जीवन बताउँदैमा मानिस सुखी, सम्पन्न अनि नैतिकवान र चरित्रवान हुँदैन । इमान र नैतिकता र धनसम्पत्तिमा हैन व्यक्तिको चरित्रमा हुन्छ । उसको चरित्रले नै उसको परिवार र सन्ततिको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।
आज यही कुराको अभाव छ । शासनसत्तामा बस्नेहरुले इमान र नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकेर बेइमानी नै बेइमानी मात्रै गर्दैजाँदा राजनीति समाजसेवाको उच्च थलो हैन कि नाजायज काम गरेर रुपियाँ कमाउने विना लगानीको व्यवसाय भएको छ । हामीले देखेको सपना, हामीले साचेको सपना अनि आकांक्षा यस्तै भ्रष्टहरुबाट पूरा हुनै सक्दैन । अब समय आएको छ । मान्छे चिनौं । इमान र नैतिकता उच्च भएकाहरुलाई रोजौं वैशाख ३१ र जेठ ३१ गतेको निर्वाचनमार्फत भ्रष्टहरुलाई गतिलो झापड हानौं । मुलुकमा इमान, नैतिकता र उच्च गुणवक्तायुक्त पात्रहरुलाई शासनमा पु¥याउने महायज्ञलाई सफल तुल्याऔं ।